SAWIRO: Qaar ka mid ah Ergooyinka qeyb galaya Shirka dib u heshiisiinta oo Dhuusamareeb gaaray - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO: Qaar ka mid ah Ergooyinka qeyb galaya Shirka dib u heshiisiinta...
SAWIRO: Qaar ka mid ah Ergooyinka qeyb galaya Shirka dib u heshiisiinta oo Dhuusamareeb gaaray
Guddiga Qaban-qaabada Shirweynaha Dib u heshiisiinta Galmudug ayaa maanta ku soo dhaweeyey Caasimada Galmudug ee Dhusamareeb Ergooyinka Beelaha ka qeyb-galayaasha Shirweynaha Dib-u heshiisiinta Galmudug.
Gudoomiyaha Guddiga dib u heshiisiinta maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa sheegay in maanta Magaalada Dhuusamareeb ay soo gaareen qaar ka mid ah beelaha ka qeyb galaya Shirka.
Waxaa uu sidoo kale ugu baaqay beelaha kale in ay yimaadan Magaalada si Shirku u furmo oo ay uga qeyb galaan.
Waxaa uu Shirku si rasmi ah u furmi-doonaa markii ay soo gaaraan Ergooyinka dhiman goobta Shirka.
Previous articleMilatariga iyo Mucaaradka Suudaan oo kala saxiixday heshiis muhiim ah
Next articleDHAGEYSO: Barnaamijka Dhacdooyinka 17-08-2019
Hoggaamiyaha Ahlusunna” Waan ka tanaasulney go’aankeenii siyaasadeed ee Hogaaminta Galmudug”
Hugaamiyaha Guud Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax ayaa ku dhawaaqay in uu guud ahaan ka tanaasulay Siyaasadda maamulka Galmudug. Waxaa uu sheegay in aysan...